Abenzi base China abenzi bezinto zokumba kunye nabathengisi | Dongheng Oomatshini
Iimpawu excavator yethu mini
UKUSEBENZA NGOKUPHAKAMILEYO KOKUSEBENZA
IPHEPHA LOKUGQIBELA LWE-OYILE
Ukongeza, izitayile ezingenazifestile zamkelwe kakuhle kubathengi baseYurophu naseMelika.
I-KINGER mini excavator excavator iphuhliswa ngoqwalaselo oluphezulu.Ihambisa amandla kunye nokusebenza ngokobungakanani be-compact ukukunceda usebenze kwezona zicelo ziqinileyo. Ngokweemfuno zomsebenzi ezahlukeneyo, umthengi unokukhetha izixhobo zokuncamathelisa ezahlukileyo kwi-KINGER attachments, ezinje nge-auger yomhlaba, ikhefu le-hydraulic, i-hedge trimmer, i-log grapple, i-coupler ekhawulezayo njl.
Kunye NACHI Impompo hydraulic kunye jika iimoto, PTM ukuhamba ngeemoto,I-Yanmar Injini,I-KYB Ixabiso lokuhambisa, i-KINGER mini excavator yethu isebenza kakuhle phantsi kweemeko ezininzi zokusebenza ezinjengokwakhiwa kweefama kunye notshintsho ezidolophini.
Ukuba iodolo yi-1pc, sinokuhambisa iimpahla kwiQingdao Port zingaphelanga iintsuku ezingama-25 emva kokufumana intlawulo. Sinokuhambisa iimpahla kwizibuko lakho elifunekayo.
Singumenzi wokwakha oqeqeshiweyo iminyaka engaphezu kwe-11 Zonke iimveliso zethu zifumana ifom ye-CE kunye nesatifikethi se-ISO ngomgangatho ophezulu kunye nozinzo. Ukongeza, samkela i-OEM.
Ngasentla isikhombisi sethu sokucoca kunye nokuqwalaselwa kwesalathiso sakho.Nawuphi na umbuzo wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.Sisebenzisa zonke iimoto ezikumgangatho ophezulu, impompo kunye nenjini njl.
Egqithileyo I-auger yomhlaba
Okulandelayo: Iliwa liyalwa